I-Pendle Cottage-inxalenye yeYork Cottages - I-Airbnb
I-Pendle Cottage-inxalenye yeYork Cottages
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGayle
IPenlde ligumbi lokulala elihle elinamagumbi amabini akhiwe ngamatye. IPenlde ibonelela ngomlilo opholileyo ovulekileyo kwindawo yokuphumla kunye negumbi lokutyela elihle kunye nekhitshi. Ukulala abantu abane kamnandi kodwa kunokuhlala ukuya kuthi ga kwi-6 kunye neebhedi ezisongekileyo
IPendle Cottage yindlu enamagumbi amabini okulala enziwe ngamatye abekwe phakathi kwamasimi epropathi yethu yeehektare ezili-15. Inika ubunewunewu obutofo-tofo ngendlela yefenitshala ephucukileyo, umlilo ovulekileyo, indawo yokuhlala emangalisayo kunye nekhitshi lokonwabisa. I-Pendle ijonge i-paddock yethu ye-Alpaca kwaye ibonelela ngembono ethandekayo phezu kwepropathi yethu
I-York yidolophu entle nephithizelayo yelifa lemveli ezaliswe ngumtsalane nemincili.
Uqhagamshelwano nabaninimzi luyafumaneka nge-imeyile nangefowuni. Uya kukwazi ukuzivumela ukuba ungene kwisakhiwo.